Noocyada caleenta shaaha waxaa loo qaybin karaa lix qaybood: shaah madow, shaah cagaaran, shaah cad, shaah huruud ah, oolong-tea iyo shaah madow, taas oo ku xidhan heerka halsano. Shaaha kala duwan waxay leeyihiin hawlo daryeel caafimaad oo kala duwan. Aynu eegno shaqooyinka kala duwan ee ...
Lix faa'iidooyinka ugu weyn ee cabitaanka shaaha oo aadan aqoon
Waa caadi in shaaha la cabbo nolosha. Dad badan ayaa u tixgeliya shaaha hiwaayadooda, gaar ahaan dadka waayeelka ah waxay jecel yihiin cabbitaanka shaaha. Qof walba waa ogyahay, sidaa darteed waxaan cabnaa shaah maalin kasta si aan u ogaano waxa shaah yahay. Ma fiicantahay? Haddaba miyaanay habboonayn in dadku cabbaan shaaha? Tafatiraha soo socda ayaa ...
10ka Isticmaal ee Shaaha ugu sarreeya oo aadan aqoon
Isticmaalka shaaha ayaa inta badan ah cabbitaan, kaas oo ah cabbitaan aad u fiican oo leh midab, caraf iyo dhadhan labadaba. Caleenta shaaha ee la diyaariyey ayaa iyana aad u qiimo badan. Qaar ka mid ah adeegsigaas ayaa hadda loo soo bandhigay sida soo socota: 1. Ukunta shaaha kari. Qaar waxay isticmaalaan caleemo shaah oo la kariyey si ay u boi ...
Ujeedada korinta dheriyada iyo doorka shaaha
Ujeeddada kor u qaadidda dheri ma aha oo kaliya in shaaha laga dhigo mid dhalaalaya oo qurux badan, laakiin sidoo kale sababta oo ah dheriga dhoobada (ama dheri dhagaxa) laftiisa ayaa leh dabeecadda xayeysiinta tayada shaaha. Sidaa darteed, shaah si fiican loo ilaaliyo ayaa si waxtar leh "shaah u caawin karta" Dheriga kicinaya ...
Faa'iidooyinka cabitaanka shaaha cagaaran
Shaaha cagaaran waa shaah la sameeyo halsanayn, kaas oo haya maaddooyinka dabiiciga ah ee caleenta cusub oo hodan ku ah nafaqooyinka. Shaaha cagaaran waxaa lagu sameeyaa uuminta, shiilidda iyo qalajinta caleemaha geedka shaaha. Waa mid ka mid ah cabbitaannada ugu caansan adduunka waxayna leedahay taariikh kumannaan sano ah. L ...
Faa'iidooyinka cabitaanka shaaha madow
Dadka jecel shaaha ee jecel shaaha madow waa inay ogaadaan in shaaha madow la qooyay oo la dubay, wuxuuna leeyahay dhadhan fudud iyo dhadhan qafiif ah. Khubaradu waxay sheegeen in faa’iidooyin badan laga helo cabitaanka shaaha madow. Tusaale ahaan, faa'iidooyinka haweenka inta badan cabba shaaha madow ayaa ah inay door ka ciyaari karaan quruxda iyo ...
Dhaqanka shaaha ee Shiinaha
Tuulada Shuige waxay ku taallaa Hoshupian oo ku taal waqooyi -bari ee Magaalada Baimu, oo xuduud la leh Degmada Jinhua Wucheng dhanka galbeed. Houshupian waxay asal ahaan ahayd Houshu Township, oo loogu yeeri jiray "Houmu" ama "Muhoushu" waqtiyadii hore. Sanadkii 1992, waxaa lagu biiriyay Baimu Township kadib markii ...
[Nuqul] Sida loo diyaariyo koob shaah ah oo kaamil ah
by admin on 18-03-22
Ma dareentaa degenaansho iyo deganaan markaan cabno shaah? Cabbitaanka shaaha ma aha oo kaliya dhaqanka cuntada caadiga ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn gaar ah oo lagu baabi'inayo xagjirnimada xorta ah maxaa yeelay waxay ka kooban tahay noocyo kala duwan oo ah antioxidant -ka iyo nafaqooyinka antioxidant -ka. Sidaa darteed, cabitaanka shaaha ayaa waliba caawiya ...
[Nuqul] Dhaqanka Shaaha Shiinaha iyo Taariikhdiisa
by admin on 16-10-15
Taariikhda Shaaha Shiinaha Taariikhda shaaha Shiinuhu waa sheeko dheer oo tartiib tartiib ah oo turxaan bixin ah. Jiilka beeralayda iyo soo -saareyaashu waxay dhammaystireen habka Shiinaha ee wax -soo -saarka shaaha, iyo kala duwanaansho badan oo gobol oo gaar ah. Qaadashada Caleemaha Shaaha
[Copy] Yixing Shaaha Madow
by admin on 15-05-11
Dad badan ayaa taga Yixing si ay uga soo iibsadaan dheryihii shaaha ee caanka ahaa ee Zisha. Halkaasna waxay aad ugu dhowdahay inay helaan shaah, Yixing Shaaha Madow. Haa, oo wehel u ah sumcadda Yixing Zisha Shaaha Pot, Yixing Shaaha Madow aad bay caan u tahay. Laakiin runtii waa shaah wanaagsan, sida badan oo cusotmers fi ...
Yixing Shaaha Madow
by admin on 12-02-14
Dhaqanka Shaaha Shiinaha iyo Taariikhdiisa
by admin on 08-12-12